Otu esi etinye Visual Studio Code (VS Code) na openSUSE Leap 15 - LinuxCapable
Otu esi etinye Visual Studio Code (VS Code) na openSUSE Leap 15
Tọzdee, Ọktoba 28, 2021 Fraịde, Ọktọba 22, 2021 by Jọshụa James
Mepụta & Bubata ebe nchekwa ihe onyonyo onyonyo
Wụnye Visual Studio Code
Otu esi ebido Koodu Studio Visual
Otu esi emelite Koodu Studio Visual
Otu esi ewepu (wepụ) Koodu Studio Visual
Ihe ngosi Visual Studio bụ ihe ndezi koodu-efu mere site na Microsoft maka Windows, MacOS Linux. Njirimara Koodu Visual Studio gụnyere nkwado maka nbipu, njikwa Git agbakwunyere, mmecha koodu nwere ọgụgụ isi, snippets, na nrụgharị koodu. Microsoft Visual Studio Code nwekwara nnukwu ọbá akwụkwọ ndọtị nke nwere ike ịga n'ihu na-akwado mmepe ngwanrọ raara onwe ya nye na koodu iji mee ka ụba na nyere aka ịzụlite na iji ngwanro ahụ.
N'ime ntuziaka na-esonụ, ị ga-amụta otu esi eme ya wụnye Visual Code Editor na openSUSE Leap 15.
OS akwadoro: mepereSUSE Leap - 15.x
Melite gi openSUSE Sistemụ arụmọrụ iji hụ na ngwugwu niile dị adị adịla ugbu a:
Ka ịtọlite ​​akaụntụ sudo dị adị ma ọ bụ ọhụrụ, gaa na nkuzi anyị na na-agbakwunye onye ọrụ na Sudoers na openSUSE.
Site na ndabara, Visual Studio anaghị abanye na ebe nchekwa openSUSE. Agbanyeghị, ị nwere ike ibubata ụlọ ọrụ gọọmentị Visual Studio na sistemụ gị ngwa ngwa site na ime ihe ndị a.
Nke mbụ, bubata ebe nchekwa koodu VS site na iji iwu a.
Na-esote, bubata GPG iji nyochaa izi ezi nke ngwugwu ahụ.
Site na nhazi ebe nchekwa isi mmalite, ị ga-emerịrị ndepụta isi mmalite njikwa ngwugwu zypper gị iji gosipụta mgbakwunye ọhụrụ tupu nrụnye Visual Studio. Iji mee nke a, gbanye iwu a na njedebe gị:
Mgbe a na-enwe ume ọhụrụ, ị ga-amata ma ebubata ụlọ nchekwa ndị ahụ nke ọma site na nsonaazụ ndị a:
Ugbu a tinye Visual Studio site na iji iwu a:
Iji kwado nrụnye, ị nwere ike iji iwu ụdịdị a nyochaa dị ka ndị a:
Na nrụnye zuru ezu, ị nwere ike ịgba ọsọ Visual Studio n'ụzọ ole na ole dị iche iche. Nke mbụ, mgbe ịnọ na ọdụ gị, ịnwere ike iji iwu a:
N'aka nke ọzọ, gbaa ọsọ iwu koodu n'azụ ka ịtọhapụ ọnụ ọnụ:
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe bara uru, ma ị ga-eji ụzọ a na desktọpụ gị mepee ụzọ ahụ: Ihe > Gosi ngwa > Ihe ngosi Visual Studio. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
The oge mbụ imepee Visual Studio, ị ga-ahụ windo ndị a:
Ekele, ị tinyela Visual Studio Code na openSUSE Leap 15.
Ka imelite koodu VS, mee ya iwu melite zypper na ọdụ gị ka ị ga-elele sistemụ gị niile maka mmelite ọ bụla.
Iji wepu ngwanro Visual Studio na sistemu gị, mee iwu a na ọdụ gị:
ụdị Y, wee pịa Tinye igodo ịga n'ihu na mwepụ nke Visual Studio.
Ntuziaka ahụ egosila gị otu esi etinye Microsoft Visual Code maka openSUSE Leap ma gbakwunye ebe nchekwa iji melite mmemme na-ejighi aka budata na wụnye. Visual Code bụ otu n'ime ndị ndezi IDE efu na-ejikarị na mbara ala. Ọ dịkwa fechaa yana nhọrọ magburu onwe ya maka sistemụ gị ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na sava kama iji ndị editọ ederede Linux ndabara dị ka. wd or nano.
Categories openSUSE Tags megheSUSE Leap 15, Ihe ngosi Visual Studio Mail igodo
Otu esi etinye / kwalite na Nginx Mainline kacha ọhụrụ ma ọ bụ Stable na openSUSE Leap 15
Otu esi etinye Python Pip / PIP3 na Debian 11 Bullseye